‘दलहरुको स्वेच्छाचारी एवं उच्छृंखल शैलीविरुद्ध मेरो उम्मेदवारी’ | नयाँ शक्ति नेपाल
‘दलहरुको स्वेच्छाचारी एवं उच्छृंखल शैलीविरुद्ध मेरो उम्मेदवारी’
- ११ असार, २०७४
होम बहादुर गलामी
बुटवल उपमहानगरपालिका प्रमुख उम्मेदवार
नयाँ शक्ति पार्टीको नेतृत्वमा बनेको ७ दलीय संयुक्त लोकतान्त्रिक मोर्चाको समर्थनमा बुटवल उपमहानगरपालिका प्रमुख पदमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दर्ता गराउनुभएका समाजसेवी होम बहादुर गलामीसँग नयाँ शक्ति नेपाल अनलाइनका लागि गरिएको कुराकानीको संम्पादित अंशः
तपाईंको राजनीतिक सामाजिक पृष्ठभूमि बताइदिनुस् न ।
मेरो बाल्यकाल गुल्मीमा बित्यो । म ७/८ वर्षको उमेरमा बुबासँगै बुटवल झरेको हुँ । मैले एसएलसीपछि सामान्य सरकारी जागिर पनि खाएँ, तर २०४५ सालमा जागिर छाडेर जनआन्दोलनमा सक्रिय भएँ । त्यसैबेलादेखि राजनीतिक रुपले सक्रिय भएको हो । पछि २०४९ र ५४ सालको निर्वाचनमा वडामा अत्यधिक मतले अध्यक्ष पदमा विजयी भएँ । मैले यस नगरपालिकामा लेखा तथा राजस्व परिचालन समितिको संयोजक एवं निर्माण समितिको संयोजक भएर काम गरेको छु । बुटवलमा उपभोक्तामार्फत काम गराउने सुरुवात मेरै नेतृत्वको निर्माण समितिको कामबाट सुरु भएको हो । जनसहभागिता र लागत सहभागिताको अवधारणामा नगरपालिकाको संयुक्त काम मेरै नेतृत्वमा सुरु भएको हो । यसर्थ, मैले यो नगरको भौतिक विकास एवं राजश्व परिचालनमा महत्वपूर्ण काम गर्ने अवसर पाएको छु । साथै पछिल्लो समयमा म कुनै पनि राजनीतिक दलमा आवद्ध नभईकन स्वतन्त्र रुपमा शिक्षा क्षेत्र र समाजसेवामा सक्रिय भएर काम गरिरहेको छु ।
तपाईंलाई बुटवल उपमहानगरपालिकाको प्रमुख पदमा उम्मेदवारी दिन केले प्रेरित गर्यो ?
म करिब ३/४ वर्षदेखि स्वतन्त्र छु । मेरो विगतको क्रियाकलाप र काम हेरेर कतिपय साथीहरुले यत्रो चुनावमा तपाई किन चुपचाप भनेर जिज्ञासा राखे । साथीहरुबाट तपाईं अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा आयो । यो ठाउँमा वास्तवमा दलहरुको चुनावी शैली र व्यवहार उत्छृंखल एवं स्वेच्छाचारी बन्दै गएको र विकासको नाममा कार्यकर्ता पोस्ने काम मात्र भएकोले यस्ता क्रियाकलापलाई अवरोध गर्नुपर्छ भनेरै मैले स्तवन्त्त रुपले उम्मेदवारी दिएको हो । समाजमा परिवर्तन, सुृशासन र सदाचार चाहने स्वतन्त्र बुद्धिजीवी तथा आम नागरिकहरुको आग्रहमा नै मैले उम्मेदवारी दिएको हुँ ।
आधा शताब्दी भन्दा धेरै समय बुटवल बस्नुभयो, बुटवलमा कस्तो परिवर्तन पाउनुभयो ?
हिजोको बुटवल र आजको बुटवलमा निकै ठूलो परिवर्तन आएको छ । यस्तो होला भन्ने कल्पना पनि गरिएको थिएन । हिजो यहाँ कृषि नै मुख्य पेशा थियो, जनताको माग पनि वनजंगलको छेउछाउमा पशुलाई छेक्ने तारबारको व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने हुन्थ्यो । पछि सहरीकरण बढ्यो तर, सहर अव्यवस्थित हुँदै गयो । म वडा अध्यक्ष भएकै बेला मेरो क्षेत्रमा सडक फराकिलो पार्ने काम मैले गरेको थिएँ । कतिपय कुराहरु दलीय मतभेतका कारण पनि गर्न सकिएन । शुख्खानगर क्षेत्रका फराकिला बाटाहरु पंचायतकै संरचना हो । बहुदलीय व्यवस्थामा आएपछि भएको हैन । यसरी सहर परिवर्तन त हुँदै गयो साथै अव्यवस्थित पनि बन्दै गएको महशुस हुन्छ ।
बुटवलको अहिलेको मुख्य समस्या के हो ?
बुटवलको मुख्य समस्या भनेको नगरपालिकामा कुनै दैविक घटना भयो भने अव्यवस्थित सहरिकरणको कारणले यहाँ ठूलो जनधनको नोक्सानी बेहोर्नुपर्छ । त्यस्तै बुटवलको मुख्य समस्याको रुपमा पार्किंग को समस्या देखिएको छ । जसरी अहिले सहर विस्तार भइरहेको छ, बजार क्षेत्रमा पार्किंगको समस्या विकराल बनेको छ । यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ । विभिन्न स्थानमा ओभरहेड ब्रिज, सबवे, वानवेहरु बनाएर आवागमन व्यवस्थित गर्नुपर्छ । त्यस्तै बजार क्षेत्र नजिक भएका संस्थागत जग्गाहरुमा ती संस्थाहरु र उपनगरपालिकाको समन्वयमा बहुतल्ले पार्किंग भवन बनाएर पार्किंगको समस्या समाधान गर्नुपर्छ ।
त्यसैगरी फोहोरमैला, खानेपानी, अव्यवस्थित सहरिकरण जस्ता समस्याहरुको पनि उचित समाधान गर्नुपर्ने यहाँको टड्कारो आवश्यकता हो । सिस्ने खानेपानी परियोजना अहिले रोकिएको छ, यसलाई तत्काल पूरा गर्नुपर्छ । फोहोरमैलाको समस्या समाधान गर्न नीजि तथा सार्वजनिक क्षेत्रको सहभागितामा फोहोर प्रशोधन गर्दै विद्युत निकाल्नेतर्फ कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
तिनाउ नदी क्षेत्रको अव्यवस्थित बसोबासको समस्या समाधान कसरी गर्नुहुन्छ ?
यो सुकुम्बासी नभएर अव्यवस्थित बसोबास हो । त्यहाँ केही अत्यन्तै निम्नवर्गीय मानिसहरु पनि छन् । यो समस्या समाधान गर्न त्यहाँको जग्गालाई न्यून मूल्यांकन गरेर उनीहरुलाई जग्गाधनी बनाउने र त्यो आम्दानीले त्यही क्षेत्रको संरक्षणका लागि तिनाउ नदी क्षेत्रमा ठूलो तटबन्ध वा पर्खाल लगाउन सकिन्छ । र, त्यसको छेउछेउ तिनाउ करिडोर निर्माण गर्न सकिन्छ । यसो भयो भने बस्ती पनि व्यवस्थित हुन्छ र तिनाउको बाढीबाट हुने क्षतिलाई पनि न्यूनीकरण गर्न संभव छ । त्यहाँबाट उठेको राजश्व त्यहीं खर्च गर्ने भएपछि त्यहाँका बासिन्दाहरु पनि सहमत हुन्छन् । जो पैसा दिएर जग्गा आफ्नो बनाउन सक्दैनन् उनीहरुलाई दीर्घकालीन किस्ताबन्दीको सुविधा दिएर पनि त्यो काम गर्न सकिन्छ ।
तपाईंको मुख्य योजना के हो ? बुटवलमा के के गर्ने लक्ष्य छ ?
सबैभन्दा पहिले नगरको समस्या पहिचान गरेपछि तिनको समाधान गर्ने नै हो । यहाँको शिक्षा क्षेत्रको समस्या समाधान गर्दै बुटवल बहुमुखी क्याम्पसलाई विश्वविद्यालयमा स्तरोन्नति गर्ने, लुम्बिनी अस्पताललाई शिक्षण अस्पतालको रुपमा संचालन गर्न पहल गर्ने मेरो योजना रहेको छ । त्यस्तै यहाँको डाँडाकाँडामा जुन हरियाली छ त्यसको संरक्षण गर्दै भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरी पर्यटकीय क्षेत्रको रुपमा विकास गर्ने मेरो योजना छ ।
तपाईंले परिकल्पना गरेको बुटवल कस्तो हो ?
यहाँ हामीसँग हरियाली, पाखापखेरा त छ, तर यसको उपयोग हुन सकेको छैन । बुटवललाई पूर्वाधारले सम्पन्न सुन्दर, सफा र हराभरा बनाउने नै मेरो परिकल्पना हो । हिउँद र सुख्खायाममा पनि तिनाउको पानी जमाएर गर्मी छल्न सक्ने वाटर पार्क निर्माण गरी रमाउने ठाउँ बनाउने मेरो परिकल्पना हो । र, यहाँको मुख्य समस्या सडकमा बढिरहेको ओभर ट्राफिकिंगलाई समाधान गर्न वैकल्पिक बाटोहरु जस्तै तिनाउ कोरिडोर निर्माण गर्ने मेरो योजना हो ।
चुनावी रणनीति कस्तो छ, चुनावी अभियान कसरी संचालन गर्दै हुनुहुन्छ ?
मेरो उम्मेदवारी स्वतन्त्र हो । यसर्थ दलहरुका गतिविधिबाट आजित भएका उनीहरुको उछृंखलताबाट दिक्क भएका मानिसहरुले मलाई मत दिन्छन् भन्ने आशाका साथ उम्मेदवारी दिएको हुँ । मेरो विगतको पृष्ठभूमि मैले गरेका काम, लगनशीलता मेरो कार्यशैलीलाई हेरेर मलाई मत दिनुहुन्छ भन्ने मेरो विश्वास हो । साथै ठूला पार्टीका मान्छेहरुले पनि मलाई समर्थन गर्नेछन् भन्ने लाग्छ । साथै अहिलेसम्म नयाँ शक्ति पार्टी, नेकपा माले, संघीय समाजवादी, नेकपा माले, नेकपा माक्र्सवादी संयुक्त, अखण्ड पार्टीलगायतले समर्थन गर्ने भएका छन् ।
मतदाताले तपाईंलाई मत किन दिने ?
मलाई यस अर्थमा मत दिने कि मैले यो नगरपालिकाको विकासका लागि धेरै काम गरेको छु । मेरो कार्यशैली समाजसेवी भावना र इमानदारितालाई हेरेर पनि मलाई मत दिनु अनुरोध पनि गर्दछु ।